महेन्द्रको कूटनीति | Nagarik News - Nepal Republic Media
३ श्रावण २०७६ १९ मिनेट पाठ
हरेक देशमा दुईवटा पाटा हुन्छन्– एउटा रहस्यमा छेकिन्छ। अर्को देखिन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, नागरिक समुदाय, प्रेसलगायत सबैका चपाउने र देखाउने दाँत हुँदारहेछन्। पारदर्शी हुन कोही चाहँदैन। ‘ट्रान्सपरेन्सी’ भन्ने संस्था नै कति ‘ट्रान्सपरेन्स’ छ भनेर प्रश्न उठाएका छन् पश्चिमका लेखक र विश्लेषकले। कूटनीतिमा पनि कुटिल खेल हुन्छ जो आफैँमा घातक हो। देखिने र छेकिने कूटनीतिमा रुमल्लिएको छ नेपाल। लेबनान, इराक, इरान, सुडान, अफगानिस्तानलगायत देश पनि यसरी नै फस्दै गएका थिए।
आन्द्रेइ कोलेस्निकोभले लेखेका छन्– ‘आत्मसम्मानका लागि विश्वमा सरकारविरुद्ध जनता संघर्ष गरिरहेका छन्। मर्यादा र सम्मान चाहन्छन् उनीहरू। रसियामा पनि त्यही भइरहेको छ।’ कुनै न कुनै किसिमको वैचारिक ज्वालामुखी देखिन्छ, जताततै। त्यसले पनि कूटनीतिलाई प्रभावित पार्ने गर्छ।
निर्वाचनका बेला जनताबाट प्राप्त समर्थन वा जनादेशको अर्थ अंकुशरहित, विवेकहीन र सर्वसत्तावादी शैलीलाई समर्थन भन्ने होइन। नेताको स्वेच्छामा होइन, नीतिले राष्ट्र चल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिशास्त्रको मान्यता छ। राजनीति र कूटनीतिलगायत सबैतिर त्यो लागु हुन्छ। ससाना कुरामा पनि उल्टोपाल्टो गर्ने र गम्भीर विषयलाई बलमिच्याइँ र ठट्टा–रमाइलोमा उडाउने प्रवृत्तिले शासक र सरकार मात्र बदनाम, असफल र अलोकप्रिय बन्दैनन्, राष्ट्रले विश्वसनीयतासमेत गुमाउँछ। त्यस्तो स्थिति टाट पल्टेको बैंकको जस्तै हुन्छ।
महेन्द्रले त्रिपन्न राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध नबनाएको भए ब्रिटेन र भारतकै इच्छामा नेपाली कूटनीति रुमलिन सक्थ्यो।
जेठी पत्नीको मृत्युपछि एकजना धनाढ्य व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरे। जेठीको कोखबाट जन्मेको तीन÷चार वर्षको बालकलाई हुर्काइन् कान्छी पत्नीले। उनका पनि सन्तान भए। नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेक सबैको दृष्टिमा ‘असल’ देखिने उद्देश्यले उनले जेठीको छोरालाई साह्रै ‘माया’ गर्थिन्। ओछ्यानमै खाने कुरा पु¥याइदिने, बिहान आठ–नौ बजेसम्म सुतिरहन दिने, हिँडडुल गर्दा छोरो थाक्छ भनेर कारमै ओहोर–दोहोर गराउने र केटाले पाँचसय रुपियाँ खर्च माग्दा दुई तीन हजार रुपियाँ दिन्थिन् उनी। त्यस्तो घातक मायाले केटो बिग्रिँदै गयो। मोटाएर नब्बे केजीको भद्दा भयो। रक्सी–चुरोट आदिका कारण अनेकाँै रोगले थला प¥यो। पच्चीस छब्बीस वर्षमै हृदयाघात भएर म¥यो, सौताको छोरो।
दातृनिकाय, विदेशी शक्तिकेन्द्र तथा राजनीति÷कूटनीतिमा चलखेल गरिरहेका षड्यन्त्रकारीहरूले नेपालका प्रायः सबै शक्तिलाई त्यसरी नै अत्यधिक माया गरेर पुल्पुल्याइरहेका छन्। त्यसैले जनताका समस्या सुन्नै चाहँदैनन् नेता र दलहरू। राज्यका हरेक अंगमा जनताका सेवक होइन, ‘मालिक’ बसेका छन्। गाउँगाउँमा ‘सिंहदरवार’ पुगेको प्रचार गरिए पनि वडावडामा हजारौँ श्री ३ पैदा भएका छन्। यो भनेको राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने र ऋणमा डुबाउने प्रपञ्चमात्र हो। जनता प्रतिपक्षी बन्दै गएका छन् र सरकार हाँक्ने दलको एउटा सम्प्रदायमात्र आफू सत्यको बाटो हिँडिरहेको दाबी गरिरहेको छ।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइ तथा उपप्रम तथा विदेशमन्त्री मार्सल चेन यी नेपाल आए। प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला तथा चीनका नेताहरूले सिंहदरबारमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यहाँ चीनका नेताद्वयले स्पष्ट भनिदिए– ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा मित्रता हो, कूटनीतिमा। नेपालले चीनको र चीनले नेपालको कहिले अहित चिताउँदैन। चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको सदैव समान गर्छ।’ भारतीय पत्रकार प्रकाशचन्द्र टण्डनले पटकपटक ‘नेपाल र चीनबीच केही समस्या छ त नि’ भनेर जिस्क्याएपछि मार्सल चेन यी जंगिए–तपाईँ पत्रकारमात्र बनेर प्रश्न गर्नुहोस्।
राजा महेन्द्रले कसरी भारत, चीन र अमेरिका जस्ता राष्ट्रसँग सन्तुलन कायम राखे ? यो प्रश्न परराष्ट्र मामिलामा अभिरुचि राख्ने सबैका निम्ति अध्ययन र जिज्ञासाको विषय बन्ने गरेको छ। प्रवल राष्ट्रवाद, अठोट, निर्णय क्षमता र विश्वास एवं समयमै आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थिति बुझ्न सक्ने गुणले महेन्द्र सफल भए। उनको निकट बनेर काम गरेका पुराना राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ भन्छन्– यदाकदा कुनै कुरामा द्विविधा हुँदा उनी तत्काल अरुको सल्लाह लिन्थे।
प्रवल राष्ट्रवाद, अठोट, निर्णय क्षमता र विश्वास एवं समयमै आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थिति बुझ्न सक्ने गुणले महेन्द्र सफल भए। उनको निकट बनेर काम गरेका पुराना राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ भन्छन्– यदाकदा कुनै कुरामा द्विविधा हुँदा उनी तत्काल अरुको सल्लाह लिन्थे।
महेन्द्रले त्रिपन्न राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध नबनाएको भए ब्रिटेन र भारतकै इच्छामा नेपाली कूटनीति रुमलिन सक्थ्यो। रक्षा र परराष्ट्र मामिलामा भुटानले दिल्लीकै आदेश मान्नुपरेझैँ हामी दुनियाँबाट पृथक बन्न सक्थ्यौँ। तसर्थ, अमेरिका र चीनको विश्वास जितेर राजा महेन्द्रले नेपाललाई मात्र होइन, दक्षिण एसियालाई नै गुन लगाए।
जंगबहादुरलाई नेपोलियनले तरवार उपहार दिए। महारानी भिक्टोरियाले लण्डनमा भव्य स्वागत गर्दैै अभिनन्दनपत्र प्रदान गरिन् जंगबहादुरलाई। क्रिस्चियन धर्मावलम्वी शासक, कहिले सूर्यास्त नहुने सवल राष्ट्रकी महारानीबाट नेपालका प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई गरिएको सम्मान ब्रिटेनले नेपाललाई गरेको सम्मान थियो। त्यो कालखण्ड मठ्याहातन्त्र थिएन। आफ्नै इच्छामा नेपाल चलेको थियो।
ससाना कुराको पनि ख्याल गरिन्छ कूटनीतिमा। राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला राजाका लागि व्यवस्था गरिएको होटलमा श्री ५ को झण्डा फह¥याउनुपर्ने भएपछि बेइजिङका अधिकारीहरूले सोधेछन्– राजाको झण्डामा सिंह अंकित छ। नेपाल दरवारमा राखिएको झण्डामा सिंहका कतिवटा जुँगा छन् ? जानकारी गराउनुहोला।
चीनस्थित नेपाली राजदूतले श्री ५ को झण्डाबारे आद्योपान्त सोधे। सोहीमुताविक जवाफ पठाइयो। यस्तै, अटलबिहारी बाजपेयी भारतको विदेशमन्त्री छँदा नेपाल भ्रमण गरे। राजदवारमा पुगेर सहर्ष राजा वीरेन्द्रको चरण स्पर्श गरे। भारतीय पत्रकारहरूले यसबारे जिज्ञासा राख्दा ‘विश्वका एकमात्र हिन्दु राष्ट्रनायक भएकै कारण राजाको चरण स्पर्श गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको’ बताए। उनले ‘स्वतन्त्र राष्ट्रको हिन्दु राजा अरु कतै छन् भने उनको पनि खुट्टा छोएर आशीर्वाद लिन आफू तयार रहेको’ बताएपछि पत्रकारहरू निरुत्तर भए।
नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री छँदा सन् २००२ को फेब्रुअरी र मार्चमा सो राज्यमा हिन्दु–मुुसलमानबीच दंगा भयो। २५४ जना हिन्दु र ७९० जना मुसलमान मारिए। २२३ जना बेपत्ता पारिए। अमेरिकाले मोदीलाई सन् २००५ मा प्रवेशाज्ञा (भिसा) समेत दिएन। यसले मोदीको कूटनीतिबारे धेरै प्रश्न उठ्यो। पछि उनले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गरे। ब्रिटिस लेखक तथा पत्रकार एन्डी मारिनोले ‘नरेन्द्र मोदी ः अ पलिटिकल बायोग्राफी’ पुस्तकमा लेखेका छन्– ‘मोदी जे बोल्छन्, हृदयबाटै बोल्छन्।’ यसको अर्थ उनी देवता होइनन्, केही अवगुण छन् उनका पनि। तर अठोट बलियो छ। अठोटबेगरको कूटनीति ताप र प्रकाश नदिने सूर्यजस्तो हुन्छ। त्यो न न्यानो हुन्छ न ज्योतिर्मय।
अठोट बलियो छ भने मानिसले गन्तव्य बिर्सिँदैन। टीकाप्रसाद आचार्य नवलपरासीमा मालपोतका हाकिम थिए। उनको प्रशस्त जमिन थियो राणाकालमा। टीकाका छोरा टंकप्रसाद आचार्य राणा शासनका कट्टर विरोधी भए। आचार्यले भनेका थिए– ‘त्यसबेला शासकहरूको चाकरी गरेको भए म पनि जागिरे बन्थेँ होला।’ राडीमा बसेर मकलको आगो तापिरहेका रामहरि शर्माले बालसुलभ पाराले हाँस्दै भने– ‘दाइले भन्नुभएको ठीक हो। हामीले कसैको चाकरी गरेनौँ। जनताको हक, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र प्राप्ति हाम्रो एकमात्र लक्ष्य थियो।’ बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वकालमा परराष्ट्रमन्त्री भएका चुडाप्रसाद शर्माका बाबु मोहनशमशेरका हजुरिया थिए भनेर लेखेका छन्।
नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन गर्ने हो भने नेपालीकै बलबुतामा हुनुपर्छ भन्ने टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा र चुडाप्रसाद शर्मालगायतका प्रजातन्त्रवादीहरूको दृढ विश्वास थियो। त्यसैले २०४६ सालको आन्दोलन ‘विदेशीबाट सञ्चालित’ भन्दै आचार्यले वक्तव्य दिएका थिए। बिपी कोइरालाको सोच–संस्कार (स्कुल अफ थट्) सुरुमा फरक थियो। पुराना राजनीतिज्ञ तथा कांग्रेसका नेता सुन्दरराज चालिसेले ‘बिपीसँग सुरुमा बितेका मेरा केही दिनहरू’ शीर्षकको संस्मरणमा नेपाली कांग्रेस भारतमा जन्मँदा त्यसको नाम अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस रहेको जनाएका छन्। उनले पार्टी स्थापनाका दिन कलकत्तामा भारतीय झण्डा फर्फराइएको र गणेशमान सिंह र आफूले कडा विरोध गरेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल प्रजापरिषद्को सदस्य रहेका गणेशमान सिंह र चालिसेलगायतका युवकले ‘नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो तसर्थ नेपाल र नेपाली हितमा पार्टी खोलिएको हो भने ‘अखिल भारतीय’ भन्ने शब्दहरू हटाऊ भन्ने दबाब दिएको कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। (स्रोत– नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, लेखक डा. राजेश गौतम, पृष्ठ ५५)
चर्को विरोध आएपछि ‘अखिल भारतीय’ भन्ने शब्दहरू हटाइयो। प्रजापरिषद्का प्रतिनिधि बनेर गएका गणेशमान सिंह (गुप्त नाम कृष्णबहादुर प्रधान) नेपाली कांग्रेसको सदस्य बनेर स्वदेश फर्किए। त्यसबेलासम्म टंकप्रसाद आचार्य, चुडाप्रसाद शर्मा, रामहरि शर्मा र खड्गमान सिंह काठमाडौँमा बन्दी थिए।
चीनमा माओले सुरुमा त्यस्तै भूल गरेका थिए। माओका रचनामा त्यसको व्याख्या छ। उनले लेखेका छन्– ‘मैले पनि रसिया र त्यहाँका कम्युनिस्ट नेता लेनिनलाई सुरुमा पूर्ण विश्वास गरेँ। पछि ज्ञान भयो, राष्ट्रियताको मोडल आफ्नै हुनुपर्ने रहेछ।’ त्यस्ता ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट पाठ सिकेका राजा महेन्द्रले नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीतिलगायत आन्तरिक नीतिलाई आफ्नै ढंगले सञ्चालन गरेर ठूला शक्तिको दबाबबाट राष्ट्रलाई तटस्थ राख्न खोजेको देखिन्छ।
२००५ साल वैशाख १४ गते नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाटै राजीनामा पठाए। ‘रुन्चे महाराज’ भनिने श्री ३ पद्मको राजीनामा लिएर काठमाडौँ आए विजयशमेशर। ‘वैधानिक कानुन’ लाग गर्ने कुरा स्वतः हरायो। कानुन घोषणा गरे श्री ३ पद्मले तर उनमा त्यो लागु गर्ने अठोट थिएन। इमान, अठोट, समर्पण तथा आत्मसम्मानबेगरका नारा नक्कली ओखती बेच्ने चटकेका जस्तै हुन्छन्।
‘तपाईँ किन पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र वीरेन्द्रका कामको मात्र प्रशंसा गर्नुहुन्छ ?’ काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा भेटिएका एकजना प्राध्यापकले पंक्तिकारलाई सोधे। मैले हाँसेर प्रत्युत्तर दिएँ– ‘तपाईँले अहिलेका कुनै जीवित नेतालाई मन, वचन र कर्मले हृदयदेखि पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, भरोसा र सम्मान गर्नुभएको छ ?’ जब ठूलो खडेरी पर्छ, तब हामी पानीका मुहान खोज्न थाल्छौँ। नेपाली राष्ट्रवाद र स्वाभिमानको पुनर्जागरण गराए ती महापुरुषले। त्यसैले सम्झना आइररहन्छ, पृथ्वीनारायण, महेन्द्र र वीरेन्द्रको।
सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, कूटनीति आदिको अध्ययन गर्दा नेपालको इतिहासप्रति गर्व गर्नैपर्छ। पन्ध्र सय वर्षपहिले पनि हाम्रो आफ्नै मुद्रा, नीति र दर्शन थियो। कहिले पनि पराधीन भएनाँै हामी। कुनै पनि शासक त्यो बेला अरुको खटपनटनमा चलेनन्। केही वर्षयता नेपाल विदेशी शक्तिको उपराज्य जस्तो बन्दै गएको छ। निर्णय अरुले नै गर्दारहेछन्। डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएकै बेला भनेका थिए– साँचो त अन्यन्त्रै रहेछ। आज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लज्जित भएर भन्दैछन्– ‘मलाई त धेरै कुरा थाहै दिएनन्।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ– देश अरुले नै चलाइरहेका छन्।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०८:३५ शुक्रबार
कूटनीति पारदर्शी घातक ट्रान्सपरेन्सी